आयल निगमले डाक्यो साधारणसभा, बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने, आइपिओ निष्काशन गर्ला? :: BIZMANDU
आयल निगमले डाक्यो साधारणसभा, बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने, आइपिओ निष्काशन गर्ला?
प्रकाशित मिति: Jul 12, 2018 3:08 PM
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले चुक्ता पूँजी बढाउन बोनश शेयर जारी गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको संचित मुनाफा ११ अर्ब रुपैयाँबाट बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेको नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए।निगमले साउन ११ गते ३६औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ।यो साधारणसभाबाट बोनश शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ।
निगमले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको साहले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्ममा १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा रहेको निगम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि संचित नाफामा छ। नेपाल सरकारले संचित मुनाफालार्इ बोनस शेयरमा परिणत गर्न स्वीकृति दिएमा ११ अर्ब रुपैयाँ कै बोनस शेयर जारी गर्ने शाहले बताए।
निगमले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अधिकृत पूँजी ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको प्रवन्धपत्र पेश गरिसकेको छ। अधिकृत पूँजी अनुसार पूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यतालार्इ साधारणसभामा छलफल गर्ने योजना बनाएको साहले बताए। ३० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजीको सीमामा रहेर नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, निगमले संयुक्त रुपमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने साहले जानकारी दिए।
आइपिओ निष्काशन गर्ला?
निगमको हालको चुक्ता पूँजी २९ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसमा सरकारको मात्रै ९९.४६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
बाँकी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड ०.२५६५, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी ०.१५३९, नेपाल बैंक लिमिटेड ०.०७७ र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ०.०५१३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।निगमले ३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउने लक्ष्य लिदै गर्दा प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने या नगर्ने विषयमा सरकारकै निर्णय चाहिने साहले बताए। निगमले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ।
निगमको संचित मूनाफा तीन वर्षदेखि धनात्मक रहेको हुँदा निगमले चाहेमा प्राथमिक शेयर निष्कान गर्न सक्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्ममा १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा रहेको निगम २०७२/७३ मा भने एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ जगेडा गर्न सफल देखिन्छ। यस्तो संचिती गत आर्थिक वर्षसम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
आयल निगमले डाक्यो साधारणसभा, बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने, आइपिओ निष्काशन गर्ला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।